उपचारका लागि बाबुराम दिल्ली जाने, ट्युमर भएकाे आशंका ! : RajdhaniDaily.com - उपचारका लागि बाबुराम दिल्ली जाने, ट्युमर भएकाे आशंका !
Home Breaking News उपचारका लागि बाबुराम दिल्ली जाने, ट्युमर भएकाे आशंका !
काठमाडाैं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई उपचारका लागि भारतको नयाँ दिल्ली जाने भएका छन् । उनी आज नेपाल वायुसेवाको जहाजबाट भारतको नयाँ दिल्ली जान लागेका हुन् ।
उनको पेटमा समस्या देखिएपछि लामो समयदेखि काठमाडौंको निदान अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार गराउँदै आएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिले चिकित्सकहरुले न्युरो-इन्डोक्राइनको ट्युमर भएको आशंका गरी सल्लाह र सिफारिश गरेकाले उनी दिल्लीमा त्यसको उपचारका लागि जान लागेका हुन् । दिल्लीमा उनको उपचार ‘इन्स्टिच्युट अफ लिभर एण्ड बिलिअरी साइन्सेस’मा हुनेछ । उपचारका क्रममा उनीसँग हिसिला यमी र उनका प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डे रहनेछन् ।
उपचारका लागि बाबुराम दिल्ली जाने
ट्युमर भएकाे आशंका !
राजधानी समाचारदाता - April 17, 2020
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले झुठा मुद्दा चलाएर निर्दोषलाई फसाउने...
रासस - May 10, 2020
कला राजधानी समाचारदाता - February 21, 2020
काठमाडौं । दशौं अन्तर्राष्ट्रिय लोक साँस्कृतिक मेला काठमाडौ, ललितपुर र पोखरामा हुने भएको छ । एभरेष्ट नेपाल कल्चरल...
विदेश एजेन्सी - April 10, 2020
भर्खरै सुजीतकुमार झा - April 23, 2020
जनकपुरधाम । बुधबार अबेर राति समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच भएको एकीकरणलाई लिएर राजपामा असन्तुष्टि देखिएको छ । एकीकरणका...
बिचार प्रेमलकुमार खनाल - May 10, 2020
श्रीकृष्ण सिग्देल - February 21, 2021